ကလောရွှေတွင်းပြိုကျမှု ပျောက်ဆုံးသူ ၁၀၀ ကျော်ဟုဆို | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Qur’ans torn by Buddhist terrorists in Myanmar
အိပ်မက်ထဲမှာ အကြမ်းဖက်ဗုဒ္စဘာသာဝင်တွေ အင်းစိန်ထောင်ထဲရောက် »
“တွင်းထဲပိတ်မိတာ မရှိပါဘူး။ သတင်းအမှားသာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၄င်းက ငြင်းဆိုသည်။
This entry was posted on May 10, 2013 at 10:24 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.